Xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oo maantay laga xusay Boosaaso (Sawiro) – SBC
Xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oo maantay laga xusay Boosaaso (Sawiro)
Waxaa maantay Hotel-ka Karaama 2 ee ee magaalada Boosaaso lagu qabtay xaflada si heer sare ah loo soo agaasimay laguna xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL oo ku aad an maantay oo ah 15-ka Bisha May .
Waxaa xafladan lagu xusayay maalintan qaaliga ah ka soo qay galay madax kala duwan oo ka socotah dowlada Puntland, dhalinyaro, ururda hooyoyinka, arday ka socotay jaamacadaha ku yaal magaalada Boosaaso, Odayaal dhaqameed, nabadoono, iyo qaybah kale ee bulshada,
Waxaa ugu horayntii halkaasi ka hadalay xiriiriyah dalada Abyan C/xakiin Baajuun oo ugu horaytii mahad balaaran u jeediyay intii ka soo qayb gashay xaflada lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay tahay maalin qaali ah oo mudan in la xuso loogana baahan yahay muwaadin walba oo Soomaali ah, isagoo sheegay in ay mar walba ay diyaar u yihiin in ay mid nimada Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan ka dalad ahaan, soona dhawaynayaan cid walba oo jecel mid nimada Soomaaliyeed
Sidoo kale waxaa goobtaas ka hadlay ku xigeenka duqa Degmada Boosaaso C/qaadir Yuusuf Daahir oo isna mahad balaaran u jeediyay dalada Abyan oo uu shegay in ay qabatay wax loo baahnaa.
Waxaa kaloo uu mahad balaaran u jeediyay Duqu intii ka soo qaygashay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL.
Waxaa isna ka hadlay xafladaas Sheekh C/saaq Xuseen Ciise oo ka mid ah Culimaaudiinka gobolka, Isagoo sheegay in ay mudantahay Xuska iyo Xusuusashada Maalmaha Wadaniga ah sida Maanta oo kale o ay ku beegantahay xuska Maalinta Dhaliyadii u soo halgantay dalka ee SYL.
Sheekha waxa kale oo uu sheegay in loo bahan yahay in aan marna laga tegin wanaaga diinta islaamka, islamarkaana aan loo arkin xafladaha Ceynkan oo kale mid Diinta ka dhan ah uuna wadanwalba leeyahay.
Goobtaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay daraame qiiro ku abuuray dhalintii ka soo qaygashay iyo heeso la qaday midnimadii soomaaliyeed waxaana soo dhaweeyay dadka ku nool gudah magaalada Boosaaso sheegana in ay aad ugu faraxsan yihiin xuska maalintan qiimaha mudan.